Moqups, oo ah codsi khadka tooska ah looga soo diro siligyada | Abuurista khadka tooska ah
Lua louro | | Naqshadeynta Webka, HTML
Moqups, Codsiga on-line ee loogu talagalay samee siligyo silig ah faylalka faylalka si dhakhso leh oo fudud. Qorshahan waxaa ka dambeeya koox ka kooban lix injineerro xamaasad leh oo ku nool Romania oo sheegaya inay doonayaan inay abuuraan qalab qurux badan oo xaliya dhibaatooyinka dhabta ah.
Codsigan websaydhku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u aragto qaab-dhismeedka iyo hawlgalka shabakadaha ama barnaamijyada sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Waxaan haynaa awoodeena, nooca bilaashka ah, xulashada in ka badan 60 naqshadaha vector-ka horay loo sii qorsheeyay si loogu daro sawirkeena iyo inaan awoodno inaan si dhakhso leh u dhoofino. Marka lagu daro sawirrada aan ku haysanno qaab ahaan, waxaan haysannaa ikhtiyaar aan ku darno kuwa aan ku haysanno kombuyuutarkeenna si aan ugu shaqeyno si raaxo leh. Haddii aad rabto ku dar astaamo gaar ah in aadan haysan oo aadan ku qancin kuwa ay bixiso MoqupsXusuusnow qoraalkii aan daabacnay toddobaadyo ka hor xirmo kheyraad leh astaamo si aad ugu soo dejiso bilaash.
Adeegso Moqups waa mid aad u fudud oo dareen leh. Waxaan kaliya u baahanahay inaan ka soo jiidanno canaasiirta qeybta bidix ee shaashadda ilaa qeybta midig oo aan hoos u dhigno. Faa'iido weyn ayaa ah inaan ku shaqeyn karo lakabyo, sida Photoshop, iyo inuu awood u yeesho kormeeridda dhowr waxyaalood haddii aan u aragno inay lagama maarmaan tahay. Qalab kale marka la naqshadeynayo waa ikhtiyaarka lagu toosinayo walxaha daaqadda, iyaga koox, iwm.
Waqtiga dhoofin, layaab nagu yeelan mayso. Waxaan ku sameyn karnaa qaab PDF ama PNG ah.
Sidoo kale waa in la dhaho taas Moqups Waxay ka shaqeysaa dhammaan daalacayaasha hadda jira iyo aaladaha mobilada, sidaas darteed isticmaalkeedu wuxuu u sahlanaan doonaa helitaanka websaydhka iyo helitaanka shaqada (iyada oo aan loo baahnayn wax dheeri ah oo dheeri ah).
Macluumaad dheeraad ah - Xirmooyinka kheyraadka: 908 + 1.973 icons si aad u soo dejiso bilaash
Xigasho - Moqups
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » HTML » Moqups, codsi khadka tooska ah si loo abuuro siligyo